XOG:Waa Imisa Xarumaha Gaarka ah iyo Kuwa Dowlada Federalka ee Al-Shabaab ay ka joojiyeen dhismayaashooda? -
HomeWararkaXOG:Waa Imisa Xarumaha Gaarka ah iyo Kuwa Dowlada Federalka ee Al-Shabaab ay ka joojiyeen dhismayaashooda?
XOG:Waa Imisa Xarumaha Gaarka ah iyo Kuwa Dowlada Federalka ee Al-Shabaab ay ka joojiyeen dhismayaashooda?
Al-Shabaab ayaa muddo dheer ka joojiyeen dhismiyaal hotel iyo ganacsi kale, iyo ilaa xarumo kale oo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Al-Shabaab waxay joojiyeen dhismo ka socday isgoyska Jubba, kuna dhaggan hotel Dorbin oo isagana qorrax ka soo bax kasii xiga xarunta ugu wayn ee NISA, sidoo kalane ku dhaggan aqalka golaha senate-ka Soomaaliya (Aqalka Sare). Dhismahaan ayaa waxaa la sheegay in loo dhisayay dhowr wasaaradood oo katirsan xukuumadda Soomaaliya, sida gaadiidka iyo caafimaadka ay ku soo guuri lahaayeen, mana bilaaban ilaa hadda dhismahaas oo muddo hakad ku jira.
Sidoo kale Waxa ay ka Joojiyeen Dhismaha Garoonka Kubbada Cagta Stadio Muqdisho.
Xaqiiqda kale waxaa kamid ah in Al-Shabaab, muddo todobaadyo ah joojiyeen adeegyadii dekadda Muqdisho kadib markii ay u hanjabeen shaqaalaha iyo gaadiidleyda dekadda Muqdisho, balse dib loo xaliyey. Ayagoo Ku Qasbay in ay Bixiyaan lacag Hadii kale ay Dilayaan,
Waxaa kale Oo Jira In Dadka ay ugu yeeraan Goobo ka baxsan Muqdisho si ay lacagta ugu soo qaadaan Balse Waxaa dhawaan laga baahiyay warbaahinta Caalamka awooda alshabaab Iyo Tabaryarida dowlada somaliya waana nassib daro ku soo korortay Shacabka Ku Nool Konfurta somaliya.